Uma dream career Unicode kanye nje kokuqala ukufunda izinhlelo, ungase uthande ukuthola ulimi elula. Lolu limi izinhlelo ukufunda ngokushesha futhi uqale ukusebenzisa.
Kodwa ungazami ukuya nalenkinga esithangamini of program noma nabajwayelene nabo. Ngokuvamile umuntu osevele uyazi ukuthi ukubhala ikhodi uthola ulimi elula - lowo asebenza. Futhi uma ungumnikazi izilimi eziningana izinhlelo - umuntu owayefundelwa esikhathini kwasekuqaleni. Nalapha futhi, bonke abantu zingahlelwa ngezindlela ezihlukahlukene, futhi yini omunye uthola lula futhi ecacile, abanye abakwazi balukhulume nhlobo.
Ngakho lokho ulimi iyona elula? Ukuze nje ufunde ukuncoma Pascal noma omunye womndeni izilimi Eyisisekelo. Pascal siyonikeza kini "ngendlela efanele" izinhlelo, lapho lifundisa ukubhala izinhlelo ehlelekile futhi njalo ukumemezela izinhlobo lokwehlukile. Isikhathi yokufunda, uyokwenza amaphutha ambalwa lapho ebhalela ikhodi nganoma iyiphi nezinye izilimi. Basic ngisho elihunyushwe ngokuthi "ukukhanya" noma "Wabasaqalayo", kodwa akunakwenzeka ubhala into ebucayi ngempela.
Akuwona wonke Wabasaqalayo ziyazi ukuthi ukuze ufunde indlela uhlelo akwanele ukufunda ulimi noma izilimi eziningi. Kumele ukwazi ubuchule ukuxazulula izinkinga osetshenziswayo, ekusebenteni ngedatha afanayo. Ukuze ufunde zonke lezi zinto futhi kudingeka ngolimi lwakho lokuqala. Futhi ukuqeqeshwa ukuze sibe abafundisi abaphumelela, kubalulekile ukwakha algorithm kuka izibonelo ngabanye encwadini izinkinga, kodwa kwezinye izinhlelo ezincane. ukuncoma Ngokuvamile bebodwa, kusuka ekuqaleni, bhala Tetris noma ukusebenza amagama.
Kodwa kuthiwani uma ungenawo nje ufuna ngelinye ilanga ngibe Unicode, futhi abagcina noma yisiphi isicelo esithile leli khono? Khona-ke ungabheki for ulimi elula. Kungcono ukuba banake ofanele kakhulu, kungenjalo wena umane ukusebenzisa ubungozi bokulahlekelwa isikhathi. Izinhlelo zokusebenza zewebhu abhalwe PHP futhi Java, ukusebenza database kuyinto Delphi enhle, kodwa C ++ singakwazi ukubhala noma yini oyifunayo.
Umbhali wayevame ukunezela lokhu elula ulimi lokwakha izinhlelo Wabasaqalayo ngifuna geymdevelopery - nayizimfundamakhwela in the game lokubhala. Uma nje ufuna ukwenza okuncane umdlalo abayitoho ngeke ivumelane yiluphi ulimi nhlobo. Ukuze ihhovisi Imidlalo ufunde Flash - ke ulula futhi. Futhi uma ufuna ukudala izengezo futhi wenze Mods zemidlalo ethandwa ngaphandle C ++ ongakwazi ukuzenza.
Nquma ukuthi yiziphi efaneleka kakhulu noma ulimi lula kakhulu wakhetha ukuqala, ungakhohlwa mayelana izincwadi. Lapha kuba isikhathi ukuya ajwayelekile ochwepheshe. Labo tutorials ezinhle ngokushesha. Phela, ngezinye izikhathi ngisho izinto ezilula kungaba nzima ngenxa yokudla engafanele kanye okuphambene nalokho. Ukubhala ikhodi bese ukuxazulula nokwengqondo ku algorithmization kufanele kube mnandi, ngakho nje uyokwazi kahle izinhlelo ngokushesha ngangokunokwenzeka futhi singalahlekelwa nesisusa endleleni.
Ekuphetheni, sithi abaqhubi yesimanje izilimi eziningi zokuhlela abizwa ngokuthi ngesiNgisi. Ngakho-ke, labo coders ngubani okungenani ibe kancane kahle isiNgisi, kuyoba kusheshe futhi kube lula bekhumbula amagama abo kanye nezimiso yokusebenza.